Umphathi omkhulu weJawbone ukhanyela amarhe okuba uza kuyeka ukuthengisa iiQuantifiers | IPhone iindaba
Umphathi we-Jawbone u-Debunks Rumours Esithi Uya kuyeka ukuthengisa ii-Quantifiers
Kwiveki ephelileyo sikuxelele ngamarhe okuba inkampani Umhlathi ucwangcise ukuyeka ukuthengisa zombini ii-headphone zebluetooth kunye nezacholo zequantizer, kuba ibingayazi indlela yokuziqhelanisa nokufika kwabakhuphiswano abatsha abanjengoFitbit noXiaomi.
Ngokwala marhe, iJawbone iyayeka ukuthengisa iimodeli ze-UP2, UP3 kunye ne-UP4, izinto zokulinganisa ezikhoyo ngoku ezithengiswayo yinkampani. Nangona kunjalo, nangona kukho ukulibaziseka, i-CEO yenkampani, uHosain Rahman usanda kuthumela kwibhlog yenkampani, ukuba loo marhe abubuxoki ngokupheleleyo.
Kwiposi uRahman upapashe kwibhlog yenkampani, utsho njalo bathathe inxaxheba ngokupheleleyo ekwakheni iimpahla zokunxiba ezintsha kunye nezinye iimveliso ezilungileyo. URahman ubanga ukuba le nkampani ayinxibelelananga nayo nayiphi na imithombo yeendaba kwaye khange ibonelele ngolwazi malunga nezicwangciso zexesha elizayo zenkampani.
Ukucaca, iJawbone iyaqhubeka nokuzibophelela ngokupheleleyo kulwakhiwo olukhulu kwiimveliso ezinxitywayo. Asikaze sonwabe ngakumbi malunga neeprojekthi zethu zexesha elizayo kwaye ngenene sifuna ukwabelana ngalo nehlabathi xa sele lilungile.
Ngaphandle kokungabikho phakathi kwabavelisi bebhendi abathengisa kakhulu, i-Jawbone CEO ithi Iimodeli ze-UP2, UP3 kunye ne-UP4 ziya kuqhubeka ukubakho zithengiswa, Izacholo ezisathandwa kakhulu ngabasebenzisi. Kwakwinqaku elifanayo, khange sikwazi ukufunda nantoni na enxulumene nezixhobo zonyango ezinokuthi zipapashwe ngokudibeneyo nala marhe angasentla.
Izinto zokulinganisa imihlathi zisuswe kwiVenkile ye-Apple ekwi-Intanethi nakwizakhiwo kulo nyaka uphelileyo, kungekudala emva kokumiliselwa kweApple Watch. Nangona kunjalo, bakhawuleza bafumaneka kwakhona kwiivenkile zeenkampani, okukhokelela kukonyuka kwentengiso. Ukuhamba okungaqhelekanga okwenziwe ngu-Apple xa esusa iisongo zeJawbone kwakungekho ngqiqweni naphina, kuba ezi bracelets azinakuthathelwa ingqalelo njengokhuphiswano kwiApple Watch, uninzi lweempawu zalo mva azifumaneki kuzo zombini iimodeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Umphathi we-Jawbone u-Debunks Rumours Esithi Uya kuyeka ukuthengisa ii-Quantifiers
I-Apple inokuthintela ukuhlawulwa kwe- $ 533m yeepatent
UApple ukhupha ingxelo ehlaziyiweyo ye-iOS 9.3.2 ye-9.7-intshi ye-iPad Pro